Ngokuqhelekileyo, i-tea-hybrid, i-polyanthus ne-perestrian roses. I-rose yangaphakathi xa kuthelekiswa nomyezo ibonakala kwakhona, yincinci kuphela ngobukhulu. Kwiirusi zasekhaya, uhlobo olukhethekileyo kunye nombala weentyatyambo, zinevumba elimnandi. Indlela yokunyamekela ekhaya, ukuze ukususela entwasahlobo ukuya ngasekupheleni kwehlobo, siza kukuxelela emva koko.
Unokunyamekela njani i roses?
Ngethuba lokukhula, iintyatyambo zifuna ukushisa kwe-14 ukuya kwi-20 degrees Celsius. Kwaye ukusuka ngo-Oktobha ukuya kuFebruwari, kufuneka uqinisekise ukushisa okukhulu ngexesha lokuphumla ukusuka kwi-5 ukuya kwi-8 degrees Celsius.
Ezi zizityalo ezinothando. Indawo efanelekileyo kubo iya kuba yindwangu elangeni. Ngexesha elincinane lokukhanya ngexesha lokukhula, ukunyamekela kakuhle iirase zasekhaya, kufuneka ubenokukhanyisa ngezibane zokukhanya.
I-Roses iyancipha kakhulu amanzi kwaye iyakuthanda ukuthambisa. Njengoko umhlaba ubomile, kufuneka uwatyebe ngexesha lokukhula kunye neentyantyambo.
Bafuna ukuba nomoya omanzi, bavame ukufuthwa, kabini ngosuku.
I-Roses ithanda umoya omtsha kunye nomhlaba onomsoco. Ukuze benze ukuba bazive kakuhle, kubalulekile ukukhulula umhlaba ebhodweni. Ngexesha leentyantyambo kunye nokukhula, kufuneka badliwe kanye ngeveki kwaye akukho mfuneko yokuba bathululelwe ngamanzi abandayo.
Ngaphambi kobusika banqunyulwa, kwaye kwisebe ngalinye ama-5 asele asele, amaqabunga awasususi. Ukuqalwa xa inyanga isesigaba sokukhula. Siyabulela kule nto, iintyatyambo zikhula zifikelela kwisiqingatha semitha ukuphakama, kwaye ixesha leentyantyambo lihlala lifikelela kwiintsuku ezingama-170.
Njengoko kuyimfuneko, iirase zitshintshwe ekwindla. Ukutshintshela kwisitya esikhulu kufuneka kwenziwe ngokucophelela, ngaphandle kokuphazamisa iingcambu ngaphandle kokutshabalalisa i-coma yomhlaba, kuba iirasi ayithandi ukuphazamisa iingcambu.
Ekuqaleni kwentwasahlobo, iirase zipapashwa neziqu. Kodwa benza njalo ekwindla, kusetyenziswa amagatsha anqunywe ngaphambi kokubanda. Kuzo, ukusika nge-ubude beentimitha eziyi-15, ezinezintso eziphilileyo ezine, zinqunywe ngommese obukhali okanye i-pruner. Kwi-cuttings ushiye amaqabunga amathathu uze ufake amanzi kwindawo yokushisa, ukuze uvumele iingcambu. Kwiiveki ezimbalwa iinqununu ziya kuba neengcambu, kodwa kungcono ke ukutshala iinqununu emhlabathini xa iingcambu zihambelana kakuhle.
Iirasi zegumbi ziphantsi kwezifo ezifanayo nezinye izityalo zangaphakathi. Ukuba umoya uyomile, ngoko bachaphazelekayo yizinambuzane. Xa i-rose ichaphazeleka ngokubola kwegrey okanye isikhumba se powdery, kufuneka isityalo kufuneka sihlanjwe ngesisombululo sesoda, nganye ilitha yamanzi kufuneka uthabathe iipaspuni ezimbini ze-soda, yenza amaxesha amaninzi kude kube onke amaqabunga achaphazelekayo.
Ukuba amaqabunga omdaka avela kumaqabunga, kufuneka asuswe kunye neziqu.
Ukwandisa ixesha leentyantyambo, unokususa iintyatyambo eziboyiweyo kuzo.
Igumbi eliphezulu liyakunceda umnini ngezifo ezininzi, uphilise izixhobo. Amanzi aseRose ayaphathwa ngeengxaki zokukhathazeka. Ngezifo zamaphaphu, izigulane zihlanjwe iirase. Ioli efunekayo inefuthe elikhuthazayo kwinkqubo ye-nervous and immune system yomzimba. Ibuyisela kwakhona kwaye ibuyiselwe iiseli, iimbumba zinyango ziphilisiwe, ngenxa yoko, i-tract digestive igxininisekisa, umsebenzi weengcambu ze-endocrine ziphucula.
Inkqubo yonke yeMendeleyev imelwe kwiipalali. Enyanisweni, isityalo siyaphilisa umkhosi kunye neepalals zayo kunye neqhumiso layo. Ukukhishwa kwamanzi kwi-petals kuphelisa ukuxubha, ukucaphukisa, ukuvutha kancinane kwesikhumba.
Ukuba uthenge igumbi eliphakamileyo okanye uthenge ngalo kwisitorethi kwaye uyilinike, musa ukuyitshintsha. Vumela isityalo kwisithuba seveki ezimbini sisebenzise kwi-microclimate entsha. Xa iqhakaza, kuyimfuneko, ngokukhawuleza ukuba ulinde ngokufakelwa. Ixesha elifanelekileyo lokutshintshwa isigaba sokwanda kwenyanga.
Ukuze i-rose, ibhokhwe kufuneka ibe yinto encinane kunevenkile ngo-2-4 cm ububanzi kunye no-5-7 ububanzi bayo. Ukuba ibhokhwe i-ceramic entsha, kufuneka ukuba ngaphambili ixutywe ngamanzi kwiqondo lokushisa kweyure ezimbini iiyure. Ukuba akusiyo entsha, kufuneka ihlanjwe emanzini afudumele kunye ne-brush ekhuni, ngaphandle kwamanzi.
Uninzi oluthe gqithwayo lukhutshwe iikopi ezincinane zeeresi ezinkulu. Beka kwi-balcony okanye kwi-window yezantsi okanye empuma okanye ngezantsi, kwaye uyibukele iiveki ezimbini. Ukuba akukho zibonakaliso ze-malaise, ke i-rose ingafakwa. Ekhaya, kunzima ukwenza i-primer efanelekileyo, kungcono ukusebenzisa ama-mix mix ready. Kubalulekile ukubeka umgca wamanzi kumzantsi webhodini, umzekelo, udongwe, kungabi ngaphantsi kwe-1 cm, ukuba akukho mngxuma we-drainage ebhodweni, umjelo awufanele ube ngaphantsi kwama-4 centimitha.
Musa ukutshintshela i-rose ibe yimbumbi enkulu, ingenakuqhakaza. Emva kokuyifakela, faka ibhodi kwiintsuku ezingama-1-2 kwindawo epholileyo okanye kwiwindow esenyakatho. Xa ehlala ebhodweni elitsha, kufuneka uyondle. Oku kwenziwa ngeendlela ezi-2: ngokutya kweengcambu okanye ngokutshiza. Ukugcina izichumiso kuhlale kufundiswa ngokucacileyo. Kufuneka ifundwe ngokucophelela kwaye iyancitshiswe imilinganiselo ephakanyisiweyo. Ukugqoka okuphezulu kwixesha lehlobo lasehlotyeni kufuneka liphindwe ngokuhlwa emva kokuthambisa, kwaye wenze kanye emva kweeveki ezintathu. I Roses ekudleni ekwindla nasebusika ayifuni.
Ukunyamekela iirase ekhaya, jonga umswakama kunye nobushushu. Ngentwasahlobo nasehlotyeni, umhlaba kufuneka ube mncinane. Ukusuka kwi-atomizer encinci, ufefe i-rose ngamanzi abandayo abilisiwe, kungekhona phezulu, kodwa ukusuka ngaphantsi kwemaqabunga. Ukunceda kuyimfuneko okanye kwi-pallet okanye ngaphantsi kweengcambu, kwi-1-2 iiyure ukuthulula amanzi kwi-pallet. I-Roses iyawa kunye namanzi ebusika kaninzi kangako, amanzi kufuneka abe ncinane ngaphezu kobushushu bamagumbi. I-Roses iyayesaba imifanekiso, kwaye kufuneka ukwazi malunga nayo.
Ezi ngcebiso ziyakunceda ufumane indlela onokujonga ngayo iirase ekhaya.
Iimpawu ezisixhenxe zezona zindlu ezingenakuthobeka
Isiqhamo saseKalateia esingaphandle
I-Bougainvillea - i-chic tropical
Ilayisi yeenqwelwana kwi-multivark
IHoroscope Taurus ka-2011
I-Pita isonka nge-pink saumon
Ukubunjwa kunye nexabiso lesondlo leentlanzi kunye nemveliso yeentlanzi
Izandla ngoMatshi 8 ngezandla zabo kwi-kindergarten nasezikolweni